Lingoes Dictionary(like Babylon) - MYSTERY ZILLION
Lingoes Dictionary(like Babylon)
December 2010 edited December 2010 in Help Desk
ကျွန်တော် babylon dictionary ကိုသုံးပါတယ် ။တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဒါပေမယ့် baby lon က free မရဘူး expired ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်။ lingoes ကfree ရတယ် expired မဖြစ်ဘူး။baby lon နဲ့တော်တော်လေးကိုတူတယ်။ဒါပေမယ့်အဲဒါကမြန်မာလိုမပါတော့သိပ်အဆင်မပြေဘူး။
အဲဒါကြောင့် mz မှသူငယ်ချင်းများ lingoes ကိုမြန်မာလို translate လုပ်လို့ရအောင်ကူညီပါလို့။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်လောက်တုန်းက lingoes မှာ dictionary ပို့ထားဘူးပါတယ်။ သို့ပေမယ့် သူတို့ approve လုပ်မှ dictionary file ရမှာပါ။ convertor ကို မပေးထားပါဘူး။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် convert လုပ်မရပါ။ ထို့ ကြောင့် lingoes မှာ english - myanmar dictionary ရဖို့ အခွင့်အလမ်းနည်းပါတယ်။ သူတို့ ထည့်ချင်စိတ်ရှိတဲ့အခါမှ ရမယ်လို့ ဆိုလို့ရမယ်။
Lingoes Dictionary Creator is developing now. Please send your finished dictionary source file to [email protected], Lingoes will compile it into .ld2 for you. You will can do it yourself after the creator release.
please just havealook at this http://www.windylea.com/blog/2013/03/08/convert-ld2-dictionaries-into-human-readable-text-files/